डेँगु को रोकथाम - LiveMandu
डेँगु को रोकथाम
काठमाण्डौ, पोखरा, चितवन लगायत देशका अधिकांश ठाउँमा डेंगु ज्वरो फैलिएको हुँदा बिशेष सतर्क हुन आवश्यक छ।
– डेंगुलाई break bone ज्वरो पनि भनिन्छ किनकी यसले एकदम जोर्नी तथा मांशपेशी दुख्ने हुन्छ |
– डेंगु ज्वरो एडिस एजिप्टाइ (Ades Aegypti) जातको पोथी लाम्खुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रोग हो। यो लाम्खुट्टेले दिनको समयमा मात्र टोक्ने गरेको पाइन्छ। यो रोग मानिसबाट मानिसमा सिधै सर्दैन। वर्षातको महिना संगै जताततै पानी जम्न थालेपछी यो रोगको प्रकोप हुने गरेको पाइन्छ।
मुख्य लक्षणहरु :
– छाला, नाक, मुख आदिबाट रगत आएमा आकस्मिक अवस्था मान्नुपर्छ ।
– ८० % बिरामीमा पहिलो दिनमा, ६०-८०% बिरामीमा दोस्रो दिनमा NS1, IgM test ५-७ दिनमा पोजिटिभ देखिन्छ ।
– १५०,००० देखि ४५०,००० सम्म हुनुपर्ने प्लेटलेट लगातार घट्दै जान्छ |
बिशेष सतर्कता :
– ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल मात्र प्रयोग गर्नुहोला ।
– आइबुप्रोफेन, अस्पिरि आदिको प्रयोग नगर्नुहोला । आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन आदिले रगतलाई पातलो बनाउने हुँदा रक्तश्राबजन्य डेंगुमा प्रयोग गर्दा झन् खतरा हुन्छ ।
– बालबालिका, बृद्धबृद्धा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरु, दीर्घ बिरामीहरुलाई बिशेष ख्याल गर्नुपर्दछ ।
– जुनसुकै ज्वरो आएपनि यथेष्ट आराम गर्ने, झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त खाने, सागसब्जी / फलफुल / गेडागुडीको रस, दाल, सुप नियमित खाने ।
– डेंगुको कुनै बिशेष औषधि तथा खोप छैन। एन्टिबायोटिकले डेंगु निको हुँदैन । चिकित्सकले अर्को संक्रमण नहोस भन्ने उद्देश्यले सामान्य एन्टिबायोटिक चलाउन सक्छन । कडा एन्टिबायोटिकको आवश्यकता हुँदैन। तसर्थ जथाभावी एन्टिबायोटिक किनेर प्रयोग गर्नु हुँदैन।
– लामखुट्टे भगाउने स्प्रे अथवा लोसन (Eg. Odomus) शरीरमा लगाउने ।
– पानी जमेको ठाउँमा DDT, मालाथिन छर्नु पर्छ । १ चम्चा पेट्रोल राख्न पनि सकिन्छ ।
– माथिका लक्षण देखिएमा तुरुन्त जांच तथा उपचार गर्ने ।
– प्यारासिटामोलले ज्वरो नियन्त्रण नभए वा चिकित्सकले दिएको औषधि खाँदा पनि प्रभावकारी नदेखिए अस्पताल भर्ना हुने ।
स्मरण रहोस, प्राकृतिक खानपिन, नियमित व्यायाम, तनावरहित जीवनशैली तथा स्वस्थ्य रहने उपायहरु अबलम्बन गरेमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ । तसर्थ स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाऔं !
ज्यूँदो मानिसको पहिलो सिक्का
शताब्दी पुरूषबारे मेरो अनुभूति
जबरजस्ती करणी तथा बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरु पक्राउ
भारतले श्रिलंकालाई बेच्न आँटेको विश्वस्तरिय रेलहरु
दलाई लामाको पूर्नजन्मका लागि चीनको तयारी
M1; The Indonesian Cult who makes your Debt Disappear
जापानले बनाएको बुलेट रेलले कसरी विश्व पारवहन परिवर्तन गर्यो